Jaybird na-agba ọsọ, ekwe ekwe ekwe ntị onwe ya | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nọ n'oge nke ekweisi ekweghị kpamkpam, nke mere na Apple's AirPods abụrụla ngwaahịa achọrọ nke ukwuu site n'aka ndị na-ahọrọ ịhọrọ egwu ikuku na obere obere. Na ebe a nwere ike ghara uche Jaybird nke Logitech nwere na-arụpụta ekweisi ikuku kachasị mma ma ugbu a, ọ na-arụtụ aka n’omume ekweisi onwe ya na nke ikuku.
Njirimara oru ya na ihe ndi ozo kwesiri ibu ihe mere ndi Jaybird ji na-agba osoMa ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ njirimara nke akara ngosi karịa, anyị ga-amụtakwu banyere ekweisi ndị a.
Ọ bụghị ihe ịtụnanya na anyị, na Actualidad Gadget na Actualidad iPhone anyị anwalelarị ngwaahịa ndị ọzọ Jaybird nwere nsonaazụ dị egwu. Hasgba ọsọ nwere ndị na-ege ntị doro anya, dịka ngwaahịa ndị ọzọ nke ika ahụ. A na-eji akọ na uche ele ha anya na ndị na-eme egwuregwu, ọ bụ ya mere ha ji eji mpempe akwụkwọ ole na ole na-esonyere ha na nha na ebumnuche nke ịnye nkasi obi ahaziri nke ọ bụla n'ime ndị ọrụ ahụ. Na mgbakwunye, Jaybird Runs dakọtara na Siri ma ọ bụ Google Assistant, yabụ ha nwere nkwado dị ukwuu site na ndị mmepe.
Batrị ahụ agaghị ahapụ gị enweghị mmasị, ọ ga-enye anyị oge elegharị anya nke 12, ọ bụ ezie na anyị ga-ewere nsonaazụ a na tweezers ugbu a ruo mgbe anyị ga-anwale ha. Ha ga-adị site na Ọktọba na-abịa na € 179, otu ugwo dika onye isi ya, Apple ya na AirPods ya, ugwo mara nma nke anyi ga acho ma na weebụsaịtị Jaybird (Logitech) tinyere Amazon. Igweisi isi nwere ọmarịcha mma, yana Jaybird mbọnyere ma nwee ike mee nke aluminom. Anyị ga na-agagharị ọ bụla mmegharị nke ekweisi ndị a, nyere ohere na ha gụnyere Bluetooth 5.0.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Jaybird na-ewebata ọsọ, ekweisi ekweghị ekwe ekwe ekwe ha
Nke a bụ otu CoD: WWII pụrụ iche mbipụta nke PlayStation 4 bụ